Huawei dia handefa smartphone roa vaovao tsy misy Wear OS | Androidsis
Ny fisaraham-panambadiana eo amin'i Google sy ny mpanamboatra smartwatch maro dia zavatra izay tsy isalasalana velively ankehitriny. Ny voalohany nifindra avy tao amin'ny Wear OS (Android Wear tamin'izany fotoana izany) dia i Samsung rehefa natomboko ny taranaka voalohany an'ny Samsung Gear, Gear Fit ary ny hafa, satria ity mpanamboatra ity dia miloka mivantana ny Tizen, rafitra miasa ananany.
Io dia namela an'i Samsung atolory ny zavatra rehetra tadiavinao amin'ny fantsom-pahaizanao nefa tsy miankina amin'ny fetran'ny Google apetraka amin'ny mpanamboatra amin'ny alàlan'ny fisorohana azy ireo tsy hanisy karazana personalization amin'ireo fitaovana hato-tànany. Ny mpanamboatra farany izay mbola tsy miloka amin'ny Wear OS dia Huawei, izay nanao tamin'ny lasa.
Noho ny tsy fahafahan'izy ireo manaingo manokana ny kopian'ny Wear OS ampiharin'ny mpanamboatra amin'ny famantaranandrony marani-tsaina dia nanery ny mpanamboatra sasany toa ny Huawei nanapa-kevitra izy ireo avelao tanteraka ny sehatra handraisanao ny rafitra fiasanao, farafaharatsiny izany no mipoitra avy amin'ny tsaho farany mifandraika amin'ireo maodely roa vaovao kasain'ny orinasa aziatika hapetraka eny an-tsena.
Tamin'ny taon-dasa Huawei dia nanolotra ny Watch GT, smartwatch tantanan'ny Lite OS, ny rafitra fiasany manokana ihany koa dia ho lasa ilay rindrambaiko hitantana ireo maodely roa manaraka izay kasain'ny orinasa hapetraka mandritra ny taona. Ireto maodely roa ireto dia miovaova amin'ny Watch GT ary antsoina hoe Watch GT Active sy Watch GT Elegant.
Manolotra antsika ireo modely roa ireo efijery 1,39 mirefy, toy ny maodely tany am-boalohany, fa misy fahasamihafana kely eo amin'ny satroboninahitra. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy antsipiriany bebe kokoa momba ireo singa ho hitantsika ao anatiny.
Ny toa tafaporitsaka dia ny vidiny. Ho hita 249 euro ny Watch GT Active, raha 229 euro kosa ny Watch GT Elegant.. Ny Huawei Watch GT tany am-boalohany dia nahatratra ny 199 euro ny tsena, noho izany dia azo inoana fa ny elanelam-bidin'entana dia mifototra amin'ny singa kanto fa tsy singa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia handefa smartphone vaovao roa tsy misy Wear OS